यी हुन् मृगौला फेल हुन लागेका प्रारम्भिक संकेतहरु, यी उपायबाट बचाउन सक्नुहुनेछ !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन् मृगौला फेल हुन लागेका प्रारम्भिक संकेतहरु, यी उपायबाट बचाउन सक्नुहुनेछ !!
१) पिसावको मात्रा अचानक वा विस्तारै कम हुँदै जानु ।
२) शरीरमा सुजन आउनु, विशेषगरी अनुहारमा ।
३) मन स्थिर नहुनु वा वान्ता हुनु ।
४) रक्तचाप अचानक बढ्नु ।
५) निरन्तर रगतको कमी हुँदै जानु ।
६) तौल अचानक कम हुनु ।
हरेक वर्ष कमसेकम एकपटक आफ्नो मृगौलाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुस् । विशेषगरी ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरमा व्यक्ति वा मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र परिवारमा कसैको किड्नी फेल भएको वंशानुगत रोग छ भने झनै नियमित जाँच जरुरी मानिन्छ। किड्नी फेल भएको प्रारम्भिक लक्षणहरु साधारण रगत जाँच वा पिसाव जाँच गरेर थाहा पाउन सकिन्छ, बेलैमा रोग पत्ता लागेको खण्डमा उपचार पनि सफल हुन सक्दछ । त्यसैले तपाई पनि आफ्नो किड्नीको स्वास्थ्यबारे सधैं सचेत रहने गर्नुस्। नयाँ पुस्ता बाट सभार